Qormadii 3aad, Ee Macna Yare Mulac Dabe Mallaay Xadhig Ku Xidhe | Somaliland.Org
March 29, 2008	Waa Qormadii 3aad, ee macna yare mulac dabe mallaay xadhig ku xidhe. Kudhac kalsooni iyo ku bad-baaddid. Axmed Siilaanyo waa nin geesi ah Eebbena ku kaalmeeyey kalsooni.
Annagoo arrintii xoogaa wad-wadney oo badiba cabashadayadii u sheeganay Wasiirka ayaa waa bixiso e’ waxa si kedis ah noogu soo galay hal Habar ahoo hilboon oon dusha waxba ku sidan aan ahayn qoor-duub yaroo milikhsan, waxay u dhiibtey wasiirka warqad xidhan iyadoo raacisay weedh ahayd “wasiir Noola-osto waaye, madaxweynahaa soo dhiibey Noo”
Markuu furtay/akhriyey ayaa wejigiisii is beddeley. Shoow waxa ku qoran ha la’ siiyo Hebla, fasax ay ku iib geyso beeyo intaasoo tan dhan. Wuxu weydiiyey haweenedii warqadda sidatey wasiirku beeyadaad doonayso waa noocma? waxay tidhi Abbow foox le’ maahoo?
Intuu dhabanka calaa-casha saaray suxulkana miiska cuskiyey buu yidhi “xagaad geenaysaa? qiime intee le’eg baadse ku haysaa? kuye “Alloore maxaan ka aqaan aniga dul-saaraan ka qaadanaa maahoo, hawsheed kale maa ii taal” maya intuu yidhi buu ka jeex-jeexay warqaday odayga ka soo qaadatay. Intay naxday oo lliq-wedey bay tidhi “sug waa arki doontaa” bay albaabka ka booddey. Isagoo bedelmey cadho ayuu nagu yidhi waataa Soomaali hantideedii habrraha aan waxba ka ogeyn waraaqaha lagu kala dillaalayo. Anagoo yaaban aadna ugu baqayna isaga ayaanu ka soo baxnay waxanuna ku nidhi oo qudha “waar bal is ilaali.
Dhiirrasho iyo horuumarin. Mujaahidku wuxu kaga jawaabey warqadii Afweyne soo qoray ee baaldiga (dustbin) miiska hoosyaal ku danbaysey, daraasad iyo siyaasad kor loogu qaado beeyada lana raadiyo suuq iyo ascaar ka waafisan tan ay ku sugan tahay ee Qummantu waraaqaha ku kala bedelato.
Wuxu ku sar-gooyey kiilaha Mushaat-ka ah (mayddi) $40. 00 KG halkay ka ahayd markii hore mushaat-du $18. 00 KG keliya
Mujarwalka wuxu ugu sicir gooyey $21. 00 KG halkuu markii hore ka ahaa $9. 00 KG oo keliya
Fas-kabbiir wuxu u gooyey $11. 00 KG halkuu ka ahaa markii hore $6. 00 keliya
Fas-saqiir wuxuu ku sar-gooyey $7. 00 KG halkay ka ahayd $3. 00 KG qudha
Shaawtaha (budada maydiga) waxa loo qoondeeyey $1. 00 KG keliya halkii markii hore aan laba iib geen jirin. Beeyasataduna ay iska qubi jirtey marka laga reebo dad yaroo il-bax ah oo ku shuban jirey mardabaanadii biyaha qaboobaa oo gunta loo dhigi jirey si ay biyuhuna haraadka dhaqso ugu bi’iyaan.
isla markaana udgoon aanad ka xiisa goynayn biyaha ku reebaan iyo iyadoo daawo u ahayd caloosha iyo hawleheeda kaleba.
Wuxu ku guuleystey ascaartii cusbayd inuu hir geliyo sababtuna waxay ahayd isagoo joojiyey mayddi aan toos Bangiga ganacsiga laga soo furan L/C
inaan la’ dhoofin. 50 casho gudohood ayaa Al-cammuudi iyo ina Baa-juneyd
furteen L/C gii. Moxorka lama iibsan jirin oo kolley Sucuudiga oo markaa xoog u qaadan jirey lama keeni jirin.
Beeyaysatada oo faraasiladda (28 LBS/ 12. 5 KG) enji kagala wareegi jirtey wax kayar So Sh 4000. 00 keliya ayaa ka faa-iideystey sicirka la’ kordhiyey.
Dhacdo kale iyo xilligii Sta. Maxamed Xaashi Cilmi ayaa wuxuu ka mid ahaa dadka Siilaanyo xoog uga soo hor jeedey siyaasiyan waqtigii halganka iyadoo ay ahayd waxa laysku hayey arrin farsamo ee aanay ahayn sidaan qabo colaad iyo nacayb gaara.
Maxamed isagoo booqasho ku yimid Jiddah ayuu war uu siinayey xubnihii halkaa ka joogey SNM qaarkood wuxu ku xusay oo yidhi “markaan ahaa Xoghayaha maaliyadda ee SNM ayaan Siilaanyo u keenay lacag isagoo jooga hotel-kii kaara-mardha. “Wuxu iigu jawaabey kuwaa dhaawac ah ee jilicsan sii” mana qaadan. maxamed wuxu yidhi “waan ku qadderinayaa! Markhaatiga qormaduna wuxu furayaa, Maxamed-na ma’ rribeeyo Siilaanyona hunguri laga waa.
Weyddiinbaa waxay leedahay wasiirka maaliyadda Cawil iyo madaxweyne Riyaale ammaanaday hayaan. ma’ isa siiyaan mase isku diidaan iyagoo isu tilmaamaya Harraadka, gaajada, abaaraha, iyo sicir-bararka baahay?
iyadaa isu jawaabtey qormadu waxanay tidhi “maya maya maya sowkii Cawil wasiirka lacagtu ka dhex yidhi wakiilada ha’ loo kordhiyo madaxweynaha Afarta boqol ee kun ee Doollar iyo jar-jarka $+400, 000. 00 waa mushaharka.
Akhristow, Aqoontaa, khibraddaa, iyo dabcan halgakii lagu gubtey laguna bad-baadey Somaliland-na dhalay ee SNM. waxa ka hinaasa kana masayra UDUB waxana xusid mudan ardayda UDUB ee siyaasadda ka daalacata qaar aan waxbaba iyaga dhaammin.
Weydiin baa waxay leedahay markii la’ hor fadhiyey haweeneyda Maraykan indhaha Cumar Jaamac Faarax tolow Siilaanyo ma’ waxay ula ekoonaadeen wasiiradii UDUB een Riyaale Haa iyo hawraarsan mooyee aan maya maqashiin dhegihiisa abid?
ee sacabka iyo jiibta isla xejiya iyagoon fahminba waxay sacabka iyo saanta u tumayaan. Aan ahayn keliya hadii uu mansabku yidhaahdo oo ku dhawaaqo Ilaahow na’ gowrac aammiinta kala boobaya.
Xasuuso waraysigii dhexmaray C/hi Xaajigii BBCda iyo Muj. Siilaanyo 1988 ee uu ku jawaabey “aniga iyo Maxamed S Barre makhsin ama qol madow baanu isugu xidhanahay Caalamkuna dushuu nagaga handaraabay oo indhuhuu ka qarsaday denbiyada la’ gelayo bara-kicinta baahdey isir tirka diyaaradahoodii lagu duqeenayo. labadayada ka daaqadda lagala soo baxo waa la’ arki doonaa. Waxana khasab ahaan doonta in faalladeeda lagu dheeraan doono buu yidhi”
Maantana waxad moodaa in ina Riyaale qol la’ galay oo ku maamulnayo wixii lagu dhintay ee loo dhintay arrin iyo adduunba. isagoo ilaawsan in isaga la’ saamaxay oo la’ daayey oo la’ sharrifay oo la’ karaameeyey. Niyad-wanaajinba ha’ looga jeedee. iyo isagoo dhulkii & dadkii isku duubnaa fur-fur iyo kala fogeyn ku faasaxay. qolkaa madow lagu negaan maayo Somalilandna sidaa sii ahaan mayso e’ ha’ wer-werina.
Ahmed Haji Yussuf Dualeh, London, UK.